ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ထရန်စဖော်မာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့် National Competitive Bidding (NCB) No.MOEE- NEP/C1-W1/18 (15.8.2018) Installation for Distribution Lines and Transformers for Sagaing နှင့်ပတ်သက်၍ Pre-Bid Meeting အား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တင်ဒါရယူထားသည့် တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း နှင့် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါက အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် -
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၃ . ၉ . ၂၀၁၈
အချိန် - နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ
နေရာ - ရတနာခန်းမ
တက်ရောက်လိုပါက - အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းရုံး
စာရင်းပေးသွင်းရန် ဖုန်း-၀၉၄၂၀၇၃၃၃၀၀ ၊ ၀၉၇၇၇၇၃၀၃၇၇
E-mail – nep.pmomoep@gmail.com
Download Link : Pre-Bid Meeting